Asal raac lala xiriiray kooxaha islaamiga ee Soomaaliya - BBC News Somali
Asal raac lala xiriiray kooxaha islaamiga ee Soomaaliya
16 Disembar 2010
Image caption Baabuur goobtii qaraxu ka dhacay taalla.
Warbixinta waxaa la amray in la sameeyo kahor intii aysan dhicin qaraxyo qof la tuhunsan yahay inuu isku qarxiyay caasimadda dalkaas ee Stockholm maalintii Sabtidii la soo dhaafay.
Dalka Sweden ma ahan meel runtii ay ku badan tahay hawlaha muslimiinta mintidka ah, hase ahaatee warbixintani waxay dalkaas ku daraysaa caddeymo isasoo taraya in kooxaha asal raaca ah ay isku ballaarinayaan qaaradda Yurub oo dhan.
Qiimeynta ay sameeyeen sirdoonka dalka Sweden waxay tahay in ilaa 200 oo qof oo dalkaas ku nool ay ku lug yeesheen rabshado ay sameeyeen xagjireyaal islaami ah. Arrimahaas waxaa la sheegay inay isugu jiraan soo qorid iyo afkaar qallafsan oo dadka lagu beero iyo maalgelin lagu sameeyo rabshadaha gacan ka hadalka wata.
Tirada dadka sida firfircoon u qorsheynaya isla markaana weerarrada qaadaya waxaa la sheegay inay aad u yar tahay. Hal qof oo boliisku aanay ka warqabin markii ay warbixinta qorayeen waxaa weeye ninka reer Ciraaq ee dhalashada Sweden qaatay ee isagu fuliyay weerarkii qaraxyada ee caasimadda dalkaas ee Stockholm ka dhacay dhammaadkii toddobaadkii hore.
Baaritaanno ayaa soconaya si loo ogaado xiriirka kala dhexeyn kara dad kale oo afkaartoodu qallafsan tahay. Qaraxyadaasi waxay aad uga nixiyeen Sweden oo ah dal ku faana heerka uu ka joogo soo dhoweynta dadka soo galowga ah.
Dadka qaar ayaa rumaysan in dad kale oo badan ay taageeri doonaan in dib loo qiimeeyo arrinta dadka soo galowga ah. Warbixintani si kastaba ha ahaatee waxay ku soo gebagebaynaysaa in qaabka loo dhimayo halista ka timid islaamka afkaarta kulul ay tahay in la wanaajiyo is-dhexgalka dadka soo galowga ah iyadoo laga caawinayo helitaanka shaqooyinka iyo waxbarashada.